Maxamed Cabdi Kaliil oo xil looga magacaabay maamulka Jubbaland – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxamed Cabdi Kaliil oo xil looga magacaabay maamulka Jubbaland
Wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa xilka wasiiru dowlaha amniga ee maamulkaas loogu magacaabay Maxamed Cabdi Kaliil oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo.
Maxamed Cabdi Kaliil iyo Axmed Madoobe ayaa sida la sheegay in muddo ah isku dhacsanaa, taas oo ka dambeysay kadib markii uu Axmed Madoobe ciidamo Itoobiyaan ah u adeegsaday inuu Mr Kaliil xilkii gudoomiyenimada ee gobolka Gedo ka qaado.
Axmed Madobe ayaa wareegtada uu soo saaray ku sheegay kadib markii uu la-tashiyo badan la sameeyay ku-xigeenadiisa iyo gudoonka baarlamaanka ee maamulka Jubbaland uu go’aansaday inuu xilkaasi u magacaabo Maxamed Cabdi Kaliil.
Sidoo kale, Axmed Madoobe ayaa tilmaamay in Maxamed Cabdi Kaliil uu kalsooni buuxo ku qabo islamarkaana xilka uu u mgacaabay uu uga soo bixi karo, isagoo kaashanaya kartidiisa iyo aqoontiisa.
Si kastaba ha ahaatee, Maxamed Cabdi Kaliil ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta beesha gobolka Gedo ee ka tagay magaalada Kismaayo kadib heshiis dhex maray labada dhinac, wuxuuna kasoo jeeday qeybta Maxamud Sayid Aaden oo isna madaxweyne ku-xigeen loo magacaabay.